Sida Loogu Isticmaalo Baraha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka: Hagaha Xirfadlayaasha Caafimaadka | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Sida Loogu Isticmaalo Baraha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka: Hagaha Xirfadlayaasha Caafimaadka
Sida Loogu Isticmaalo Baraha Bulshada ee Daryeelka Caafimaadka: Hagaha Xirfadlayaasha Caafimaadka
Baraha bulshada iyo daryeelka caafimaadku waa isku-dar awood leh. Shabakadaha bulshadu waxay noqdeen ilo caafimaad iyo xog muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale noqon karaan isha macluumaadka.
Tusaale ahaan, 76% jawaab bixiyaasha sahan ayaa sheegay in ay isticmaaleen warbaahinta bulshada “ugu yaraan in yar” si ay wax uga bartaan COVID-19. Si kastaba ha ahaatee, 63.6% ayaa sheegay in aysan u badneyn in ay hubiyaan macluumaadka ay ka heleen baraha bulshada oo ay la socdaan xirfadle caafimaad.
Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka ee ku jira warbaahinta bulshada ayaa labadooduba wargelin kara dadweynaha waxayna gacan ka geysan karaan joojinta faafinta macluumaadka aan runta ahayn.
Way adkaan kartaa in la ogaado sida loo maareeyo caqabadaha warbaahinta bulshada ee daryeelka caafimaadka. Bixiyeyaasha, wakaaladaha, iyo summadaha waxay u baahan yihiin inay abuuraan nuxur bulsho oo soo jiidasho leh. Mawduucaasi wuxuu u baahan yahay inuu ahaado wargelin, waqti ku habboon, oo sax ah. Isla mar ahaantaana, waxaad u baahan tahay inaad raacdo dhammaan xeerarka iyo xeerarka khuseeya.
Maqaalkan, waxaan ku eegeynaa faa'iidooyinka badan ee isticmaalka baraha bulshada ee daryeelka caafimaadka. Waxaan sidoo kale ku siinnaa tilmaamo ku saabsan sida aad kanaaladaada bulsho u ilaalin lahayd una ilaalin lahayd.
Bonus: Hel lacag la'aan, la beddeli karo template siyaasadda warbaahinta bulshada si degdeg ah oo fudud loo abuuro hagitaan shirkaddaada iyo shaqaalahaaga.
Faa'iidooyinka warbaahinta bulshada ee daryeelka caafimaadka
Kor u qaado wacyiga
Baraha bulshada waa hab muhiim ah oo kor loogu qaado wacyiga bulshada ee ku saabsan walaacyada caafimaad ee cusub, soo baxaya, iyo kuwa sanadlaha ah.
"Nidaamyada daryeelka caafimaadku waa inay bixiyaan macluumaad la aamini karo oo ku saabsan tallaalka, fayraska hargabka, daawaynta, ebola, adigu magacaabey." Taladaas adag waxay ka timid Michael Yoder. Waa lataliyaha warbaahinta bulshada ee Spectrum Health.
Kor u qaadida wacyiga waxay noqon kartaa mid fudud sida xasuusinta taageerayaasha ku saabsan dhaqamada caafimaadka dareenka caadiga ah. Ama wax ka qabashada welwelka nolosha caadiga ah ee caafimaadka qabta.
Ma doonaysaa inaad yarayso halista #Dementia?
– Cun cunto caafimaad leh oo dheellitiran
– Jooji sigaarka
– Fir fircoonow
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo yareeyo khatarta waallida: https://t.co/zjbLfFeavB pic.twitter.com/PVY3nyGQcl
- Caafimaadka Kanada iyo PHAC (@GovCanHealth) Luulyo 12, 2021
Waxa kale oo ay noqon kartaa qalab fiican oo loogu talagalay ololaha wacyigelinta dadweynaha, maadaama aad si gaar ah u beegsan karto kooxaha dadweynaha ee khuseeya:
Xigasho: Dowladda New Brunswick
Laakiin marka arrimuhu si degdeg ah isu beddelaan, warbaahinta bulshadu waa dariiqa ugu muhiimsan ee lagu hubinayo in dadweynuhu ka warqabaan arrimihii ugu dambeeyay, tilmaamaha, iyo la-talinta. Hal dariiqo oo aad ku heli karto macluumaadka halkaas waa inaad si toos ah ula wadaagto macluumaadka qoraalladaada bulshada.
Waxaa jira dhowr tillaabo oo fudud oo aad qaadi karto si aad u yareyso khatarta ah in shilintu kugu dhacdo markaad dibadda joogto.
🌳 Ku soco wadooyin cad cad
🏃🏽 Xidho gacmo buuxa iyo surwaal
🦟 Isticmaal dawooyinka cayayaanka.
Baro wax badan oo ku saabsan ka hortagga cudurka Lyme: https://t.co/TNUzyC69A4 #TickTalk pic.twitter.com/LdjgFly4Ms
- BCCDC (@CDCofBC) Luulyo 9, 2021
Ikhtiyaar kale oo wanaagsan ayaa ah in la isticmaalo warbaahinta bulshada si loogu hago taageerayaasha ilo lagu kalsoonaan karo oo macluumaadka hadda jira. Tani waxay la macno noqon kartaa in lagu tilmaamo mareegahaaga, ama xisaabaadka bulshada ee caafimaadka dadweynaha.
Fadlan si joogto ah u hubi websaydka Dowladda NSW: https://t.co/pqkRdfh3cR, maadaama liiska meelaha welwelka laga qabo iyo talooyinka caafimaad ee la xiriira la cusboonaysiinayo iyadoo baaritaannada ay socdaan.
- Caafimaadka NSW (@NSWHealth) Luulyo 12, 2021
Kor u qaadida wacyiga ku saabsan ilo lagu kalsoonaan karo waxay u sahlaysaa taageerayaashaada inay ka hortagaan sheegashooyinka warbaahinta bulshada ee daryeelka caafimaadka ee aan habooneyn ee ay ku arkaan qoraalada xiriirkooda bulsheed.
Qoraalkaas, aan ka hadalno maroodiga qolka marka ay timaado warbaahinta bulshada iyo isgaarsiinta daryeelka caafimaadka: macluumaad khaldan.
La dagaallama macluumaadka khaldan
Baraha bulshadu ay dabcigooda tahay ayaa ka caawiya in ay si degdeg ah u faafiyaan macluumaadka kooxo kala duwan oo dad ah. Taasi aad bay u fiican tahay marka xogtu tahay mid xaqiiqo ku salaysan, waxtar leh, oo cad.
Nasiib darro, waxaa sidoo kale jira macluumaad badan oo khaldan oo caafimaad oo ku saabsan shabakadaha bulshada.
Mararka qaarkood xogta khaldan waxay ku timaadaa qaab hadallo aan run ahayn. Kuwan si fudud ayaa loo furfuray. Waxaad si fudud u soo xigan kartaa cilmi-baaris la daabacay ama macluumaadkii ugu dambeeyay ee laga helay ilo caafimaad oo lagu kalsoonaan karo sida CDC ama WHO.
Laakiin mararka qaarkood, abuurayaasha iyo faafiyaasha macluumaadka khaldan waxay adeegsadaan magaca hay'ad sumcad leh si ay u siiyaan bayaankooda kalsoonida. Xaaladdan oo kale, waxaa muhiim ah in machadka loo magacaabay tixraac ahaan inay caddeeyaan inaysan ahayn isha.
⚠️ Macluumaad khaldan oo ku saabsan COVID-19
Waxaa dhejisay UNICEF Kenya Arbacadii, Maarso 11, 2020
Laakiin waxa kale oo jira macluumaad khaldan oo qaabka “xaqiiqda” ah oo lagu soo bandhigay macnaha guud, ama macnaha khaldan. Mar labaad, xigashada cilmi-baarista iyo macluumaadka laga helay ilo lagu kalsoonaan karo ayaa ah habka ugu wanaagsan. Laakiin, tani waxay u baahan kartaa taabasho jilicsan. Dadku waxay aad ugu janjeeraan inay rumaystaan ​​macluumaadka taageeraya aragtidooda adduun ee jira.
"Mararka qaarkood waxaan isticmaali doonaa [Twitter] si aan u tilmaamo macluumaad khaldan oo muuqda," Dr. Peter Hotez ayaa u sheegay Ururka Caafimaadka Maraykanka. "Laakiin guud ahaan waxaan u isticmaali doonaa inaan ku sharaxo fikirkayga ku saabsan caabuq muhim ah ama soo baxaya."
Waa kan Dr. Hotez oo bixinaya xaalad muhiim ah oo ku saabsan ka hortagga xoolaha ee COVID-19:
Laakiin sidaas kuma shaqeyso: Haddii ay jiraan jeebab badan oo shakhsiyaadka aan la tallaalin ee Koonfurta ama WY ID ka dib gudbinta fayraska kala duwan ee delta ayaa soo dedejiya, taasoo dugsiyada ka dhigaysa mid aan badbaado lahayn, kulannada kale ee gudaha. Sidoo kale waxay ogolaataa kala duwanaansho dheeraad ah inay soo baxaan. Qof walba wuu dhibaa. https://t.co/KmaxXIo8TH
- Prof Peter Hotez MD PhD (@PeterHotez) Juun 24, 2021
Dad badan ayaa hadda warkooda ka hela baraha bulshada marka loo eego wargeysyada. Kuwa da'doodu tahay 29 iyo ka yar, warbaahinta bulshada ayaa ah isha ugu badan ee wararka, iyaga oo u sarreeya dhammaan ilaha kale ee macluumaadka. Taasi waxay bulshada ka dhigaysaa meel muhiim ah oo lagu wadaago macluumaadka go'a.
Intii lagu jiray faafitaanka COVID-19, dadku waxay u jeesteen saraakiisha caafimaadka dowladda si ay macluumaad uga helaan. Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Kanada ayaa si wax ku ool ah u isticmaalay warbaahinta bulshada iyo isgaarsiinta daryeelka caafimaadka inta lagu jiro waqtigan dhibaatada.
Tusaale ahaan, Dawladda British Columbia waxay sii waddaa inay qabato shirarka jaraa'id si ay dadka ugu cusboonaysiiso wararkii ugu dambeeyay iyo siyaasadaha la xidhiidha masiibada. Shirarka jaraa'id ayaa si buuxda loogu daalacday sida muuqaalo Facebook Live ah, iyo sidoo kale meelo badan oo wararka dhaqameed.
Fiidiyowga tooska ah ee baraha bulshada ayaa siiya hab kuwa aan heli karin barnaamijyada TV-ga maxalliga ah si ay u helaan ogeysiisyada waqtiga dhabta ah.
Qoraalada la dhejiyay iyo sawirada daboolku waxay dadka ku toosin karaan ilaha muhiimka ah eegno.
Xigasho: Dowladda Alberta
Maaraynta iyo wadaagida macluumaadka caafimaadka ayaa si gaar ah u dhib badan wakhtiga dhibaatada. Ururka Qareennada Caafimaadka Mareykanka, Bulshada Mareykanka ee Maareynta Khatarta Daryeelka Caafimaadka, iyo Bulshada Istaraatiijiyadda Daryeelka Caafimaadka iyo Horumarinta Suuqa waxay soo jeedinayaan in u diyaargarowga horudhacu uu fure u yahay ka jawaabida dhibaatada wax ku oolka ah.
Waa kuwan qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee kaa caawinaya diyaarinta:
Aqoonso daneeyayaasha muhiimka ah, xidhiidhka aasaasiga ah, iyo afhayeenka
Ogow waxa la sameeyo shanta daqiiqo ee ugu horreeya ee dhibaatada
Kalsooni la yeelo dhagaystayaashaada - oo ay ku jiraan dhagaystayaashaada gudaha
Balaadhii gaarii ta’uu qabu
Xirfadlayaasha caafimaadku waxay inta badan ku bartaan macluumaadka cusub iyo hababka ugu wanaagsan iyagoo isticmaalaya joornaalada caafimaadka iyo shirarka. Baraha bulshada ayaa gacan ka geysan kara ballaarinta gaaritaanka goobahan xog-wadaagga ah ee jira.
Iyadoo dhacdooyinka shaqsi ahaan la baajiyay 2020, Bulshada Reer Yurub ee Daawada Daryeelka Degdegga ah (ESICM) waxay abuurtay taxane shabakado. Marka laga soo tago degel go'an, waxay ku wadaageen webinars-yada iyagoo adeegsanaya muuqaal toos ah YouTube iyo Facebook. Waxay sidoo kale si toos ah-Twitter-ka dhacdooyinka.
"Anaga oo ah xoog-yaqaanno da'yar, waxaan rabnaa inaan gaarsiinno daryeelka ugu fiican bukaan kasta. Taas awgeed, waxaan u baahanahay inaan aruurino khibradaha oo aan wadaagno aqoonta. Laakiin waxaa jira caqabado aad u badan oo xafiis-ku-talo-gal ah oo ku wajahan xoog-bixiyeyaasha inay ka shaqeeyaan dibadda. Ayay tiri Laura Borgstedt, Xubinta #ESICMNEXT. #WeAreICU pic.twitter.com/3xXG3iBOSS
- ESICM (@ESICM) Luulyo 7, 2021
ESICM waxay la yaabtay in qaar ka mid ah daawashadooda ugu sareysa ay ka yimaadeen meel ka baxsan Yurub. Tani waxay ahayd dhegaystayaal ayan ku gaadhi lahayn dhacdooyinka qof ahaaneed.
Ka jawaab su'aalaha caadiga ah
Maamulka caafimaadka iyo ururada daryeelka caafimaadku waa ilo macluumaad oo muhiim ah oo ku saabsan walaacyo caafimaad oo kala duwan.
Qalabka bulshadu waxay bixiyaan habab hal abuur leh oo loogu talagalay xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka si ay wax uga qabtaan su'aalaha caadiga ah. Tusaale ahaan, Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu sameeyay Facebook Messenger chatbot. Waxay ka jawaabi kartaa su'aalaha, ku jihayn kartaa muwaadiniinta ilaha saxda ah, waxayna ka hortagi kartaa macluumaadka khaldan.
Waxaa laga soo xigtey: Ururka Caafimaadka Adduunka
La socodka caafimaadka dadweynaha
Dadku waxay soo dhigaan wax walba oo ku saabsan internetka, oo ay ku jiraan caafimaadkooda. Hashtags sida #flu waxay daaha ka qaadi kartaa marka cuduradu ka soo baxaan meelo cusub. Iyada oo la adeegsanayo qalabka kormeerka warbaahinta bulshada ee saxda ah, ururada caafimaadka dadweynaha waxay xitaa heli karaan dareenka darnaanta calaamadaha.
Tusaale ahaan, daraasad la sameeyay gu'ga 2020 ayaa lagu helay xiriir ka dhexeeya tirada Tweets ee sheegaysa telehealth iyo tirada kiisaska COVID-19 ee la xaqiijiyay ee gobol gaar ah.
Xigasho: Massaad, E., & Cherfan, P. (2020). Falanqaynta Xogta Warbaahinta Bulshada ee Telehealth Inta lagu jiro Faafida COVID-19. Cureus, 12 (4), e7838.
Professor Michael Paul iyo Mark Dredze ayaa ku sharaxay sida tani u shaqeyso buuggooda, Kormeerka Bulshada ee Caafimaadka Dadweynaha:
"Warbaahinta bulshadu waxay bixisaa faa'iidooyinka ilaha xogta dhaqameed, oo ay ku jiraan helitaanka xogta waqtiga-dhabta ah, sahlanaanta helitaanka, iyo qiimaha la dhimay. Baraha bulshadu waxa ay noo ogolanaysaa in aanu waydiino, kana jawaabno, su'aalaha aynaan waligeen u malayn inay suurtogal tahay."
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in xogta caafimaadka ee ilaha bulshada ay hagaajisay saadaalinta cudurrada. Taasi waxay si gaar ah run ugu tahay hargabka iyo cudurrada u eg hargabka.
Daraasad lagu sameeyay Dib-u-eegga Sannadlaha ah ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa lagu sheegay kuwan soo socda:
"In kasta oo Twitter-ka uu yahay goobta ugu badan ee loo isticmaalo ilaalinta dhijitaalka ah, qaar kale oo badan ayaa sidoo kale la isticmaalay. Tusaale ahaan, qaababka 'like' ee Facebook waxay si xooggan ula xiriiraan xaalado caafimaad oo kala duwan iyo dabeecado, iyo waqtiyada Instagram ayaa loo isticmaalay in lagu aqoonsado falcelinta daroogada."
Baraha bulshada waxa kale oo ay soo jiidan kartaa fiiro gaar ah u lahaanshiyaha xogta caafimaadka sida Cudurada Iga dhow.
Ma jeceshahay in la iska soo sheego #flu ama # COVID19 calaamadaha agagaarkaaga? @OutbreaksNearMe waxay ka caawisaa la socodka cudurada aaggaaga. Soo gal khariidad la socota calaamadaha qarsoodiga ah oo ku dar xogta sugan adigoo ka warbixinaya sida aad dareemayso: https://t.co/PFGLjx3FFe pic.twitter.com/0PyVDQZynY
- Hargabka CDC (@CDCFlu) Maarso 24, 2021
Arrimaha daryeelka caafimaadku waxay noqon karaan kuwo dhib badan in laga hadlo, xitaa haddii lala hadlo dhakhaatiirta. Taasi waxay si gaar ah run ugu tahay maaddooyinka sida caafimaadka dhimirka, halkaasoo ceebaynta bulsheed ay ka hor istaagi karto dadka inay raadsadaan taageerada xirfadeed ee ay u baahan yihiin.
Intii lagu jiray masiibada, JanSport waxay abuurtay ilo taxane ah iyadoo la adeegsanayo hashtag #LightenTheLoad. Hadafka shirkadda boorsada dhabarku waxay ahayd inay taageerto macaamiisheeda da'da yar, laga bilaabo 2020 xilliga ku-noqoshada dugsiga taas oo aan ahayn.
Intii lagu guda jiray ololaha, waxay siiyeen helitaanka ilaha caafimaadka dhimirka ee dhalinyarada, oo ay ku jiraan taxane taxane ah oo Instagram Live ah oo lala yeesho daaweeyayaal xirfad leh.
Tani waa tusaale wanaagsan oo ah sida xirfadlayaasha daryeelka caafimaadku ay ula shuraakoobi karaan sumadaha ka baxsan saaxadda daryeelka caafimaadka ee bulshada.
Qoraal uu wadaagay JanSport (@jansport)
Waxay sidoo kale bixiyeen macluumaadka ku saabsan sida dadku u gaari karaan taageerada dhibaatooyinka haddii loo baahdo.
Waa kan tusaale kale. Isbahaysi ka kooban in ka badan 1,000 ururo iyo machadyo daryeel caafimaad ayaa bilaabay olole hoostaga calanka The Fight Is In Us. Hadafku wuxuu ahaa in lagu dhiirigaliyo dadka ka soo kabsaday COVID-19 inay ku deeqaan balasma-kooda difaaca jirka ee qiimaha leh.
Ku socodsiinta xayeysiisyada caanka ah ee ku saleysan Facebook iyo Instagram, ololuhu wuxuu gaaray 3.95 milyan oo qof.
Ku dhawaad ​​40% dhalinyarada (da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 22) waxay adeegsadeen aaladaha khadka interneedka si ay ula xidhiidhaan dadka kale ee qaba caqabadaha caafimaad ee la midka ah. Taas waxaa ku jira kooxaha warbaahinta bulshada.
Xiriirkaas wuxuu u yeelan karaa faa'iidooyin dhab ah bukaanka. Daraasad dhowaan lagu sameeyay Joornaalka Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Deegaanka iyo Caafimaadka Dadweynaha ayaa baadhay saamaynta kooxaha Facebook iyo WhatsApp ee taageeraya halyeeyada 'PTSD. Qaar badan oo ka mid ah ka qaybgalayaasha daraasadda ayaa muujiyay siyaabaha ay taageerada uga heleen kooxahan:
“10-kii habeenimo, waxaan fariin u diray kooxda waxaana helay jawaabo degdeg ah. Kooxdu way garanaysaa waxa socda. Haa, si fiican ayaan isu naqaannaa.”
"Haddii aan ka tago kooxda WhatsApp, waxaan isla markiiba heli doonaa fariin ka socota maamulka, 'Maxaa dhacay, wax walba waa sax?' Haddii aad baxdo, waa inaad soo martaa qof. Xitaa haddii aadan dareensaneyn, waa inaad sheegtaa waxa socda."
Dabcan, waxaa jira walaacyo gaar ah marka laga hadlayo caafimaadka onlayn. Tani waxay noqon kartaa isticmaalka wanaagsan ee kooxaha sirta ah ee Facebook, kuwaas oo aan ka muuqan natiijooyinka raadinta. Isticmaalayaasha waa in lagu martiqaadaa inay ku biiraan.
Qorista cilmi baarista
Shabakadaha bulshadu waxay bixiyaan fursad ay kula xiriiraan ka qaybgalayaasha daraasadda iyo sahanka iman kara.
Sida noocyada, cilmi-baarayaasha iyo ururada daryeelka caafimaadku waxay u baahan yihiin inay fahmaan tirakoobyada warbaahinta bulshada. Marka lagu daro xulashooyinka bartilmaameedka xayeysiiska bulshada, tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad la xiriirto dhagaystayaasha saxda ah ee daraasadaha iyo sahaminta.
Ku Xidhan & Anshaxa Cilmi-baarista Furan waa mashruuc Jaamacadda California San Diego. Kooxdu waxay ka caawisaa cilmi-baarayaasha inay dejiyaan habraacyada cilmi-baarista anshaxa iyagoo isticmaalaya qalab cusub oo dhijitaal ah. Shabakadaha bulshadu waxay ka mid yihiin aaladahaas.
62% suuqgeynayaasha daryeelka caafimaadka Mareykanka waxay u aqoonsadeen warbaahinta bulshada inay tahay kanaalka suuqgeynta oo leh fursadda ugu macquulsan sanadka 2020.
Isha: 2021 MM+M/HealthLink Dimensions Healthcare Survey Survey Marketers
CVS waxay kula shuraakowday WebMD olole Twitter ah oo ay ka faa'iideysteen labada nooc. CVS waxa uu kafaala qaaday macluumaadka WebMD, oo ay ku jirto iyada oo loo marayo iskaashiga gaarka ah ee Twitter Amplify iskaashiga kaas oo keenay 30- milyan oo muuqaal xayeysiis hore ah oo loogu talagalay CVS.
Cune xanuun? Daawooyinkan guriga waxa laga yaabaa inay bixiyaan xoogaa nafis ah. Waxaa kuu keenay @CVSPharmacy. pic.twitter.com/ZjgpfnBGec
- WebMD (@WebMD) Janaayo 28, 2021
Tilmaamaha warbaahinta bulshada ee ururada daryeelka caafimaadka
Wax ka baro oo la wadaag nuxurka qiimaha leh
Sida aan kor ku sheegnay, dad badan ayaa u leexda baraha bulshada si ay xog uga helaan waqtiyada dhibaatooyinka. Bilowgii 2020, wada-hadallada Twitter-ka ee ku saabsan caafimaadka iyo fayoobaanta ayaa kordhay 54%.
Laakin si aad ula qabsato dad waynaha muddo dheer, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u bixiso macluumaad qiimo leh oo wax baraya waxna ku baraya.
Tusaale ahaan, Mayo Clinic waxay abuurtaa taxane muuqaal ah oo bulsho si ay u daboosho mawduucyada caafimaadka iyo fayoqabka caanka ah. "Daqiiqadaha Kiliiniga Mayo" waa kuwo gaaban, xog-bixin, iyo soo jiidasho leh. Fiidyowyadu waxay si joogto ah u ururiyaan in ka badan 10,000 oo aragtiyood.
Xogtu waxay u baahan tahay in la aamini karo, dabcan. Oo run ah. Laakiin waxaad heli kartaa hal-abuur iyo madadaalo haddii taasi macno u yeelato astaantaada.
Tusaale ahaan, Dr. Zubin Damania waxaa si fiican loogu yaqaan bulshada ZDoggMD. Fiidiyowyadiisa bulsho ee sida wanaagsan loo soo saaray ayaa bixiya macluumaad caafimaad oo qiimo leh isagoo ka hortagaya sheegashada su'aallaha iyo beenta ah. Waxa uu boggiisa Facebook-ga ka dhisay bulsho ay ku nool yihiin in ka badan 2.3 milyan oo taageerayaal ah.
Si loo iftiimiyo waxa haddii kale noqon kara bog cadaalad ah, wuxuu sidoo kale soo dhejiyaa fiidiyowyo majaajillo ah oo ka yimid beddelkiisa Doc Vader:
Hubi in codka aad isticmaalayso uu ku habboon yahay shakhsiyadda astaantaada. Fiidiyowyada Clinic-ga Mayo iyo fiidiyowyada Doc Vader labaduba waxay ku hawlan yihiin qaabkooda. Laakin waxay noqon lahayd mid aad u soo jiidasho leh haddii ay isweydaarsadaan qaababka.
Sidoo kale hubi inaad doorato kanaalka saxda ah ee fariintaada iyo dhagaystayaasha aad damacsan tahay. Tusaale ahaan, cilmi-baadhis dhawaan laga soo saaray Sucuudiga ayaa lagu ogaaday shabakadaha bulshada ee ugu caansan ee la wadaago macluumaadka ku saabsan cunto caafimaad leh waa.
Dhageyso wada sheekeysiga khuseeya
Dhageysiga bulshadu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la socoto wada sheekaysiga warbaahinta bulshada ee khuseeya goobtaada.
Wadahadaladaas waxay kaa caawin karaan inaad fahanto sida ay dadku kuugu dareemaan adiga, ururkaaga, iyo alaabtaada iyo adeegyadaada. Waxaad sidoo kale baran kartaa sida ay u dareemayaan tartanka. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa aqoonsato fikrado cusub oo kaa caawinaya inay hagto istaraatiijiyadaada isgaarsiineed.
Dhageysiga bulshada sidoo kale waa isticmaalka wanaagsan ee warbaahinta bulshada ee daryeelka caafimaadka si loo helo dareenka sida dadweynuhu uga jawaabayo arrimaha caafimaadka degdega ah.
Tusaale ahaan, Kulliyada Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) waxay isticmaashaa dhegeysiga bulshada si ay ula socdaan isbeddellada caafimaadka la xiriira. Tani waxay ka caawisay inay ansixiyaan telehealth mudnaan ahaan - waxay ku arkeen 2,000 oo eray oo ku saabsan aaladaha bulshada.
#Telehealth waxay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah isku dhafka adeegyada ay bixiyaan GP-yada sababtoo ah dabacsanaanteeda, ku habboonaanteeda iyo…
Waxaa dhejiyay RACGP Jimcaha, Noofambar 27, 2020
"Waxaan horay u ogeyn in GP-yadu ay dareemeen in tani ay tahay qayb ka mid ah daryeelka ay u baahan yihiin si ay u sii wadaan bixinta bukaanka," ayay tiri RACGP. "Waxaan bixinay fikradayada dhageysiga bulsheed si aan u xaqiijino in guud ahaan bulshada dhaqanka guud ay dareemayaan si isku mid ah."
Waa kuwan qaar ka mid ah ereyada muhiimka ah ee laga dhageysto kanaalada bulshada:
Ururkaaga ama shaqadaada magaca iyo gacanta
Magaca(yada) alaabtaada, oo ay ku jiraan higaada khaldan ee caadiga ah
Magacyada summada tartamayaashaada, magacyada alaabta, iyo gacanta
Wershadaha Buzzwords: Mashruuca Hashtag Daryeelka Caafimaadka waa meel fiican oo laga bilaabo.
Hal-ku-dheggaaga iyo kuwa kula tartamaya
Magacyada dadka muhiimka ah ee ururkaaga (Maamulahaaga, afhayeenkaaga, iwm.)
Magacyada dadka muhiimka ah ee ururada tartamayaashaada
Magacyada ololaha ama ereyada muhiimka ah
Hashtagyada summadaysan iyo kuwa kula tartamaya
Goobaha maamulka warbaahinta bulshada sida Hootsuite waxay kuu oggolaanayaan inaad la socoto dhammaan ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah iyo jumladaha shabakadaha bulshada ee hal madal.
Si aad u hesho talooyin iyo qalabyo badan oo arrintan ku saabsan, eeg hagahayaga sida loo dejiyo xeeladda dhegeysiga bulshada.
Mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee warbaahinta bulshada ee daryeelka caafimaadka ayaa ah in xisaabaadka warbaahinta bulshada ee daryeelka caafimaadka ay hoos yimaadaan sharciyo iyo sharciyo adag. U hoggaansanaanta HIPAA waa mid weyn, laakiin sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad raacdo xeerarka FDA ee ku saabsan xayaysiinta.
Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan ee warbaahinta bulshada iyo isku dhaca daryeelka caafimaadka ee isha mas'uuliyiinta waxaa ku jira Kim Kardashian. Waxay ku taageertay daawada jirrada subaxdii Diclegis qoraal ay soo dhigtay Instagram. Boosteedu waxay ka koobnayd xiriirinta macluumaadka khatarta iyo xaddidnaanta isticmaalka. Laakiin, FDA waxay go'aamisay macluumaadkan loo baahan yahay inay ku jiraan boostada lafteeda.
Digniin adag oo FDA ah ka dib, waxay ku qasbanaatay inay beddesho boostada. Waa kan nooca la cusboonaysiiyay ka dib digniinta FDA:
Waxaa soo dira Kim Kardashian West (@kimkardashian)
Waqtigii Kim walaashii Khloe Kardashian ay ansixisay daawaynta xanuunka dhanjafka Nurtec ODT barta Twitter-ka sanadkan, shirkadaha farmasiyadu waxay ogaadeen sida si wax ku ool ah loogu daro macluumaadka khatarta gudaha boostada fiidiyowga:
Nimanyahow!! Wararka waaweyn!!! ⭐️Dhammaantiin waad garanaysaan sida aan ugu mahadcelinayo Nurtec® ODT (rimegepant) 75 mg!! Iyo inta aan jeclahay xayaysiisyadayda tuute-ga Haddii ay taasi xitaa suurtogal tahay🙏🏼￼￼Waad ku mahadsan tahay @NurtecODT #NurtecODT
- Khloé (@khloekardashian) Juun 8, 2021
Laakiin kaliya maaha taageerada caanka ah ee kor u qaadi karta welwelka FDA. Tusaale ahaan, ilaa hadda 2021, FDA waxay soo dirtay 21 warqadood oo digniin ah kuwaas oo si gaar ah u tixraacaya sheegashooyinka lagu sameeyay akoonnada Instagram.
Ma rabtid qareenno qoraya qoraalladaada warbaahinta bulshada. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad rabto qareennada (ama khubarada kale ee u hoggaansanaanta) inay dib u eegaan qoraallada ka hor intaanay noolayn. Tani waxay si gaar ah run u tahay ogaysiisyada waaweyn ama qoraalada si gaar ah xasaasi u ah.
Hootsuite waxay ka heli kartaa in badan oo kooxdaada ah iyada oo aan kordhin khatarta u hoggaansanaanta. Dadka ka socda ururkaaga oo dhan waxay wax ku biirin karaan macluumaadka warbaahinta bulshada. Kadib, kaliya kuwa fahmay sharciyada u hogaansanaanta ayaa ansixin kara boostada ama riixi kara si toos ah.
Ururkaagu wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad warbaahinta bulshada iyo hagaha qaabka warbaahinta bulshada.
Waa inaad sidoo kale leedahay tilmaamo ku saabsan isticmaalka warbaahinta bulshada ee xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka. Siyaasadda warbaahinta bulshada ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka sidoo kale waa khamaar wanaagsan.
Kuwani waxay kaa caawinayaan in qof walba uu helo isla bogga oo hubiyo in istaraatiijiyadu ay la socoto sharciyada iyo xeerarka khuseeya. Ku dar tilmaamaha cad ee HIPAA u hoggaansan ee maaraynta macluumaadka bukaanka ee qoraallada bulshada.
Ha iloobin inaad isha ku hayso faallooyinka isticmaalayaashu kaga tagaan qoraalladaada warbaahinta bulshada iyo profile-yada, sidoo kale. Kuwani waxay sidoo kale abuuri karaan walaacyo u hoggaansanaansho.
Had iyo jeer waa ku-dhaqan wanaagsan in laga jawaabo oo la falgalo faallooyinka bulshada. Ka dib oo dhan, qofna ma jecla in lagu hadlo meel bannaan. Kuwa raacsan waxay aad ugu dhowdahay inay la falgalaan macluumaadkaaga haddii ay jawaab ka helaan qof kooxdaada ka tirsan.
Marka u hoggaansanaantu ay lug ku leedahay, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad qaado tillaabooyin dheeraad ah. Tusaale ahaan, waa inaad meesha ka saartaa faallooyinka kor u qaadaya welwelka gaarka ah. Sidoo kale ka fiirso sheegashooyinka aan habboonayn.
Waa muhiim in hab-raacyada amniga loo dejiyo kanaaladaada warbaahinta bulshada. Waxaad u baahan tahay inaad ka noqoto gelitaanka qof kasta oo ka taga ururka.
Hootsuite, waxaad ku maareyn kartaa oggolaanshaha hal dashboard-ka dhexe. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad mar walba xakameyn karto gelitaanka kanaalada bulshada. Waa kan fiidiyoow muujinaya sida loo sameeyo oggolaanshaha ururka gudaha Hootsuite:
Isku-dhafka ayaa kaa caawin kara inaad sii sugto daryeelka caafimaadkaaga suuqgeynta warbaahinta bulshada. Tusaale ahaan, AETracker ayaa kaa caawin kara inaad hesho oo aad ka warbixiso arrimaha sida cabashooyinka alaabta iyo isticmaalka calaamadda. Waxaad ogaan doontaa sida ay u dhacaan, si aad isla markiiba tallaabo u qaaddo.
Badbaadada Bulshada ayaa kaa caawin karta in aad ka fiirsato qoraaladaada bulshada siyaasadahaaga warbaahinta bulshada. Tani waxay ka hortagtaa qoraalada aan waafaqsanayn inay si toos ah u socdaan.
Xaqiiqda fudud ayaa ah in bukaanada iyo dadweynuhu ay isticmaalaan warbaahinta bulshada si ay u helaan ilaha daryeelka caafimaadka. Waxay u isticmaalaan si ay u raadiyaan macluumaadka, u helaan taageero, oo ay u gaadhaan go'aannada daryeelka caafimaadka.
Waxaa jira caqabado ka haysta baraha bulshada oo ku saabsan daryeelka caafimaadka. Laakiin isticmaalka warbaahinta bulshada ee daryeelka caafimaadka waxay sidoo kale soo bandhigaysaa fursado cusub oo cajiib ah.
Baraha bulshada waa goob wanaagsan oo lagu wadaago macluumaadka caafimaadka ee muhiimka ah. Sidoo kale waa meel muhiim ah oo lagu ururiyo cilmi-baarista iyo fikradaha waqtiga-dhabta ah. Tan ugu muhiimsan, warbaahinta bulshadu waa hab lagu taageero bukaanada iyo dadweynaha si sahlan oo loo galo oo waqtigeeda ku habboon.
Hootsuite waxay u sahlaysaa xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka iyo ururada inay maamulaan warbaahinta bulshada. Hal dashboard-ka waxaad ka jadwalaysan kartaa qoraalada shabakad kasta, la socoshada wada sheekaysiga khuseeya, oo aad la socoto waxqabadka—dhammaan adiga oo ammaan ku jira oo u hoggaansan.
Qabso bandhig shakhsiyeed, oo aan cadaadis lahayn si aad u aragto sababta Hootsuite u yahay rugta maamulka warbaahinta bulshada ee hormuudka ka ah warshadaha daryeelka caafimaadka.
Hadda qabso demo-kaaga
Nidaamka Dib -u -eegista Amazon Ma Jabin
Waa maxay hababka ugu xun iyo kuwa ugu fiican ee suuq-geynta nuxurka?